Djibouti, Eritrea oo muran dhul u dhexeeyo kadib markii Nabad Ilaaliyaal Qatari baxeen
Dowlada Djibouti ayaa maalinimadii Jimacaha 17/06/2017 ku eedeysay wadanka Eritrea in ay qabsadeen dhul kamid ah degaano ka tirsanaa xuduuda labada dal kadib markii nabad Ilaaliyaal ka socdey dalka Qatar ka baxeen halkaas.
Wasiirka arimaha dibada Mohamud Ali Yusuf ayaa sheegey in ciidamada dalka Djibouti la galiyey xaalad deg deg ah kadib wadanka Qatar kala baxeen nabad ilaaliyaal, isagoo sheegey in cabasho u gudbiyeen Qaramada midoobey iyo midowga Yurub. Golaha amaanka ayaa la filayaa in kulan albaabada u xiran yahay ka yeshaan xaalada soo korortey maalinimada Isniinta.
Wadanka Qatar ayaa sheegey in nabad ilaaliyaashooda la baxeen 14 June, 2017 kadib markii labadaan wadan diplomaasi ahaan taageereen xulifida wadanka Sucuudiga.
Wasiirka arimaha dibada Djibouti ayaa sheegey in ciidamada Eritrea qabsadeen saacado kadib markii nabad ilaaliyaashu ka baxeen degaanada la isku haystey.
Geelle oo Ku Guuleystay Doorashada Dalka Djibouti
Xukumadda Djibuiti ayaa ku dhawaaqday in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ku guulestay doorashada Madaxtinimo ee ay dadka reer Djibouti shalay u dareereen.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Djibouti, Mr. Geelle ayaa helay 68.68 boqo ...
​Dagaal dhexmaray Ethiopia iyo Eritria
​Eritrea oo madaxbanaanideeda u dabaal dagtay